Nigeria: Warar is burinaya oo ka soo baxay hablo ciyaala iskuul ah oo la af-duubay - BBC News Somali
Nigeria: Warar is burinaya oo ka soo baxay hablo ciyaala iskuul ah oo la af-duubay
Lahaanshaha sawirka Yobe Goverment
Wararka soo baxaya ayaa tibaaxaya in ciidamada nabad gelyadu ka dhaqaaqeen barihii kaantaroolka ee ay joogeen saacado ka hor intii aanay dagaalyahanno lagu tuhunsanyahay in ay yihiin Boko Xaraam weerarin iskuul hablo keli ahi dhigtaan oo ku yaal magaalada Dapchi ee woqooyi bari Nigeria.
Warbaahinta maxaliga ahi wararka ay faafisay waxay soo xiganayaan badhasaabka gobolka Yobe oo masuuliyadda weerarkaa iyo af-duubka hablo ciyaala iskuul ahba dusha u saaray ciidamadii halkaa ku sugnaa.
Sidaas oo ay tahay ayaa saraakiil ka tirsan maamulka Nigeria waxa ay haatan sheegayaan in tirada hablaha la afduubay ay tahay 110 hablood, halkii ay markii hore ku sheegeen in tiradu ahayd 105.
Warkan haatan soo baxay waa kii ugu dambeeyey warar door ah oo is burinaya oo ka soo baxayey maamulka maxaliga ah, ka dib weerarkii todobaadkii hore lagu qaaday dugsi ay hablo keli ahi dhigtaan oo ku yaal magaalada Dapchi.
Ugu yaraan 110 hablood ayaa haatan la rumaysanyahay in ay af-duubeen dabley Islaamiyiin ahi, sidaana waxa lagu sheegay warbixin uu soo saaray af-hayeenka dawladda Nigeria, Lai Maxamad.
Bilowgii todobaadkan ayaa badhasaabka gobolka Yobe, Ibraahim Gaidam, sida la sheegay waxa uu warfidiyeenka u sheegay in mitidiintu weerarka qaadeen saacado uun ka dib markii milatarigu ka soo saaray askartii joogtay baraha kaantaroolada ee Dapchi. Ciidanka ayaa se eedahaa beeniyey, laakiin hadalladaa soo baxay waxay mar labaad cariyeen su'aalo ka dhashay warar sheegayey in miltarigu amar ku siiyeen ciidamadooda in ay dib uga soo noqdaan goob uu ku dhuumaalaysto hogaamiyaha Boko Xaraam oo ay dhawr Kiiloomitir u jirsadeen.
Taliska ciidanku wuxuu warkaa ku sheegay mid been ah. Dad badan oo reer Nigeria ah ayaa waxay bilaabeen in ay sawirtaan in uu jiro qorshe sir ahi, gaar ahaan marka la eego sida ay isugu eegyihiin weerarkan Dapchi lagu qaaday iyo kii hablaha ciyaala iskuulka ah lagu af-duubay ee sanadkii 2014-kii ka dhacay magaalada Chibok.
Dhanka kalena, Madaxweyne Muxammadu Buhari ayaa koox kale u diray si ay ula kulmaan waalidiinta hablaha maqan. Waxaanu hore u sheegay in weerarka lagu qaaday iskuulka ku yaal Dapchi uu yahay masiibo qaran oo waxa uu balan qaaday inuu gargaar u fidin doono waalidiinta hablaha maqan.